Ntụrụndụ - Njem Ezinụlọ | Ekechukwu, IN | Countylọ Ọrụ Ọbịa nke Jackson County
Countygbè Jackson na-enye nnukwu njem! Ọhịa mara mma, ebe mgbaba anụ ọhịa mba na mpaghara ntụrụndụ steeti na-enye ọtụtụ kilomita nke njem ije, ịnyagharị ugwu na ụzọ ụkwụ ịnyịnya, yana ịkụ azụ, ịchụ nta na ohere ịma ụlọikwuu. Jackson County bụ ebe obibi golf abụọ na ọtụtụ mmemme a na-eme kwa afọ.
Pịa ebe a iji budata BIKE Jackson County “Pụta ma Gbaa ịnyịnya” Maapụ
Pịa ebe a iji budata Jackson County Outdoor Rec Guide
Ntụrụndụ n'èzí na Jackson County, IN
Countygbè Jackson County nwere ọtụtụ ihe omume ntụrụndụ dị n'èzí dịnụ. N'agbanyeghị oge, a ga-enwe ihe ga-eme ka onye ọ bụla nwee mmasị.
Oke ohia na okike na echekwa
Site n'ọtụtụ puku acres nke ọdọ mmiri, oke ọhịa, na nchekwa na mpaghara ahụ, Jacksongbè Jackson bụ ebe kachasị mma maka ihe ọ bụla hụrụ ụwa n'anya. Igosiputa umu anumanu di iche iche site na nkpuru ocha rue ndi turkey, bia nyochaa ala ndia echedoro ma were uzo di egwu. Oke ohia anyi ma chekwaa ga-enwe obi uto ma ichoro igba ije ma obu ohere ichu nta na azu. Ọzọkwa, dị njikere ịlele ọtụtụ ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe na ebe a na-ama ụlọikwuu maka ịnọ ogologo oge. Kwụpụ na jikọọ na ọdịdị dị ka ọ na-pụtara na-nwetara!
Hiking bụ ihe a ma ama maka ndị bi na ndị ọbịa na Jackson County n'otu aka ahụ. Nke ahụ bụ n'ihi ohere zuru oke maka ndị na-eme njem ọkwa ọkwa niile. E nwere ihe karịrị kilomita 50 nke ụzọ ụkwụ njem dị na Jackson County n'etiti Jackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge na Starve Hollow State Recreation Area.
Ndị na-akụ azụ sitere na mpaghara niile jupụta mmiri nke Jackson County n'oge ọ bụla. Na mgbakwunye na ohere ịkụ azụ na Hoosier National Forest, Jackson-Washington State Forest, Muscatatuck National Wildlife Refuge na Starve Hollow State Recreation Area, Jackson County nwere osimiri abụọ nke ndị ọkụ azụ na-enwe.
East Fork White River na-aga site na mpaghara County site na Jackson County ma na-enye ọtụtụ ebe ọha na eze na-enweta ebe niile na mpaghara, nke nwere ike ịchọta na ịpị njikọ a. Osimiri Muscatatuck nwere oke obodo Vernon na Washington yana Jackson na Washington Counties ma nwee ọtụtụ ebe ịnweta ọhaneze. A na-agba ndị na-eji osimiri dị na Jackson County ume ka ha kpachara anya maka nchekwa niile wee gụọ iwu tupu ịmalite. Gụkwuo site na na ịpị njikọ a.
Kayaking bụ ihe omume ntụrụndụ na-eto eto na Jackson County na ọtụtụ ndị na-eji East Fork White River na Osimiri Muscatatuck dị ka ụzọ isi pụọ ma nyochaa okike. A na-ahapụkwa Kayaks na Jackson-Washington State Forest, Starve Hollow State Recreation Mpaghara na Muscatatuck National Wildlife Refuge. Starve oghere na-enye ọbụna mgbazinye kayak nke enwere ike iji ya dị na ọdọ mmiri n'oge njem gị.
Foto otu ìgwè sandhill cranes n'oge njem ha na-eme kwa afọ dịka ọtụtụ ebe dị na Jackson County bụ ebe izu ike maka nnụnụ ndị ahụ. Nledo ugo nkwọcha na-efegharị, lelee otters ndị osimiri na-amịkọta ọnụ na nkume, ma ọ bụ na-ele mgbada ka ha na-ata nri n'ime ime obodo.
Doro anya na ịchọta ọtụtụ ebe maka ntụrụndụ n'èzí na Jackson County!
Hemlock Bluff Nature Chebe
Ọhịa National Hoosier
Jackson-Washington State Forest / Skyline Mbanye
Knobstone Glade Nature Chebe
N’ịbụ nke dị n’ugwu na-agagharị agagharị nke Countygbè Jackson, usoro a nwere oghere itoolu na njiri aka nke 3,125 maka ụmụ nwoke na 2,345 maka ụmụ nwanyị nwere par 35 maka ha abụọ. Ulo oru a gunyere ebe nri na ulo ahia. Hickory Hills Golf Club dị na 1509 S. State Road 135 na Brownstown.
N’ebe dị nso na nso 65, Shadowood nwere oghere 18 nwere pịrịp nke 72 na ahịhịa nke 6,709. Ilitieslọ ọrụ a gụnyere klọb, pavilion, ụlọ nri, ebe a na-ere ere na ịnya ụgbọ ala. Shadowood dị na 333 N. Sandy Creek Drive na Seymour.
Maa ụlọikwuu Na Jackson County, IN
Ọ bụrụ na gị na ezinụlọ gị na-achọ ebe maka njem ọzọ ị ga-ama ụlọikwuu, Jackson County na-enye ọtụtụ saịtị mara mma nke zuru oke maka obere ma ọ bụ ogologo njem. N'agbanyeghị ụdị ịma ụlọikwuu nwere ike ịmasị, saịtị anyị ga-ekpuchirịrị gị.
Ebe ntụrụndụ na ogige ntụrụndụ anyị na-enye ụdị ebe izu atọ: ụlọ obibi, saịtị RV, na saịtị oge ochie. Inslọ oriri zuru oke maka ndị na-ahọrọ ihi ụra n'ime ma ọ bụ maka ndị na-enweghị ụlọ ntu ma ọ bụ RV. Ebe nrụọrụ RV anyị na-enye ndị ọbịa ebe ha ga-esi nweta ọkụ eletrik. Ezubere ebe obibi oge ochie maka ebe obibi ọdịnala, jiri ụlọikwuu na isi nri na-emeghe ọkụ.
Public maa ụlọikwuu ohere dị na Oke ohia nke Washington-Washington State or Mpaghara Ogige ntụrụndụ nke Oghere.
Mgbe ịchọtara ebe kachasị mma maka ịma ụlọikwuu, nwee ọmalị njem n'okporo ụzọ dị iche iche sitere na nke dị mfe na nke siri ike. E nwere ịnya anyịnya dị n'ọtụtụ ebe na ikike steeti, yana ịnya ịnyịnya. Ọ bụrụ na ịkụ azụ bụ na burukwa, Jackson County nwere a dịgasị iche iche nke ebe ịhọrọ na ọbụna na-enye ụgbọ mmiri, kayak na ụgbọ epeepe. Achọrọ ikikere steeti. Echefula banyere ndị dinta ahụ n'ezinụlọ. A na-ahapụ ịchụ nta na ebe dị iche iche yana ikikere kwesịrị ekwesị. Ndị na-egwu mmiri n'ime ezinụlọ ga-ahụ osimiri na mmiri n'anya na Mpaghara Mpaghara Ọchịchị nke Starve Hollow.
Muscatatuck National Wildlife Refuge na Seymour, IN
Ruo ọtụtụ afọ, ndị bi na Jackson County na ndị ọbịa enweela mma nke okike na Muscatatuck National Wildlife Refuge. Site na ọtụtụ puku acres nke ala mmiri na oke ọhịa, ndị ọbịa nwere ohere ịnweta oke n'èzí n'ụzọ ọhụrụ. Ebe mgbaba ahụ dị na US 50 dịpụrụ adịpụ site na Highway 65 ma ọ dị mfe ịnweta site na Indianapolis, Louisville ma ọ bụ Cincinnati.
Ọrụ Mgbaba Ọhịa
Mgbe ị na-eleta Ebe Mgbaba Anụ ọhịa Muscatatuck, enwere ọrụ maka ezinụlọ dum. Otu ihe puru iche nke ebe mgbaba, maka ọtụtụ ndị nleta, bụ ohere ịhụ ụmụ anụmanụ na ebe obibi ha. Ebe mgbaba ahụ bụ ebe obibi nke ihe karịrị ụdị 300 nke nnụnụ na-akwaga ebe ọzọ, gụnyere ụzọ abụọ dị ebube, nke nọ na-akwụ akwụ ugo. Ndị mmadụ na-enwekwa obi ụtọ na-ekiri mpaghara ndị na-achị mmiri mmiri otters ka ha na-achụ nta ma na-egwuri egwu na mmiri mgbaba. Tinyere ikiri ụmụ anụmanụ, ndị nleta na-enwe obi ụtọ ịga ije n'okporo ụzọ ndị mara mma, na ịgagharị ụlọ Myers, ụlọ eweghachiri, mbido ụlọ iri abụọ nke narị afọ nke 20, nke ndị Myers Family Ishingkụ azụ, ịchụ nta, na ịse foto anụ ọhịa bụkwa ihe ndị na-ewu ewu.
Ebe mgbaba ahụ na-akwado ọtụtụ ihe omume kwa afọ gụnyere Wings Over Muscatatuck, Log Cabin Day, Were Day Fishing Day, Day Wetlands, ihe omume Sandhill Crane na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nchekwa ebe obibi
E guzobere mgbapu Muscatatuck Wildlife na 1966 dị ka ebe obibi maka nnụnnụ na-akwaga ebe ọzọ iji zuru ike ma rie nri. Ebumnuche ya bụ ichekwa ma weghachite ala na mmiri, na-enye nnụnụ, anụ na-enye nwa ara, anụ na-akpụ akpụ, na azụ ịkpọ ya n'ụlọ.
Ndị ọbịa nwere ajụjụ gbasara ihe ndị na-abịanụ, ụfọdụ ebe ntụrụndụ, ma ọ bụ ihe omume akọwapụtara kwesịrị ịkpọtụrụ Muscatatuck National Wildlife Refuge na Facebook ma ọ bụ kpọọ 812-522-4352.